अपनाउनुस ६ ट्रिक्स, जसले युवतीलाई आकर्षित गर्न सकिनेछ  Hamrosandesh.com
युवतीलाई आकर्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो महसुष गराउनुहोस् कि, उनी तपाईको निम्ती कति विशेष छिन् ? यसका लागि तपाईले आफ्नो केहि गोपनियता वा रहस्य खुलाउनुहोस् जो कसैलाई सुनाउनु भएको छैन । यसले गर्दा उनले आफ्नो जीवनमा एकदमै स्पेशल फिल गर्नेछिन् ।
के तपाई आफ्ना साथीका लागि हरेक काम गरिदिनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने तपाई एक कदम अघि बढ्नुपर्नेछ । कहिले काहीँ उसलाई पनि आफ्नो काम गर्न लगाउनुहोस् । यसले उसलाई तपाईप्रति जिम्मेवार बनाउन सिकाउँछ ।
– उनीसँग सधै राम्रो वार्तालाप गर्नुहोस् । कुनैपनि कुरा गर्नुअघि सोच्नुहोस् । आफुले बोलेको कुरामा उसको कति रुची छ भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुहोस् ।
– बोलीचालीमा नाटकीयता झल्कनुहुन्न । प्राकृतिक एवं स्वभाविक रुपमा प्रस्तुत हुनुहोस् ।